श्रीमानले कमाएको पैसा र सुन सहित प्रमिला परपुरुषसंग फरार, सुनौलीमा यस्तो अवस्थामा फेला परिन् ! «
श्रीमानले कमाएको पैसा र सुन सहित प्रमिला परपुरुषसंग फरार, सुनौलीमा यस्तो अवस्थामा फेला परिन् !
Published : 25 January, 2020 9:50 pm
भरतपुर महानगरपालिका वडा न १३ उज्वलनगर बस्ने बर्ष २८ कि प्रमिला सुनार वे’पता भएको भन्दै खोजी गरिदिन परिवारले आ’ग्रह गरेको छ । गत मंसिर २४ गते माईत जान्छु भनेर हिड्नु भएकी प्रमिला परिवारको सम्पर्कमा नआएपछी उनकाश् रीमान सन्तोष सुनारले पत्रकार स’म्मेलन समेत गरेका थिए ।
मिलाको साथमा करिब सात लाख रुपैयाँ, गरगहना, नागरिकता, चेक बुक समेत रहेको परिवारले जनाएको छ । विदेशमा रहेका श्रीमानसँग माईत जाने अघिल्लो दिनसम्म पनि राम्रो कुराकानी भएको र त्यसपछी फोन सम्पर्क समेत हुन नसकेको प्रमिलाका श्रीमान सन्तोष सुनारले बताएका थिए ।
श्रीमती सम्पर्कमा नआएपछी नौ दिनमा आ’पतकालिन टिकट का’टेर घरमा आएको भन्दै सन्तोषले श्रीमान श्रीमतिको बिचमा राम्रो सम्बन्ध रहेको बताउनु भयो । एक छोरा र एक छोरीको बि’च’ल्ली भएको भन्दै सन्तोषले मेघौलीमा घर भएपनि श्रीमतीकै आ’ग्रहमा वडा नम्बर १३ उजेली नगरमा घर निर्माण गरेका थिए ।
श्रीमतीले पटक पटक माईती नजीक वस्ने भनेपछी विदेशबाट कमाएको पैसाले घर बनाएको बताउनु भयो ।२- २ वर्षमा साउदीबाट नेपाल आउने गरेका सन्तोष दश महिना अगाडी मात्रै विदेश गएको बताउनु हुन्छ ।
हरेक महिना तलब पठाउने गरेको बताउदै सन्तोष भन्नुहुन्छ, “उनको नाममा २ कट्टा जग्गा छ । उनले घर छाडेको पाँच छ दिनपछी म घर आँउदिन मलाई फोन नगर्नु । कि त म घर छो’डेर जानु पर्छ कि त म म’र्नु पर्छ भनेर उनले भाई बुहारीलाई फोन गरेर सम्पर्क बिहिन भएकी थिइन ।